Fambara sivy fa miankin-doha ara-pihetseham-po
Ny ahafantarana fa diso lalana ny Fitiavana…
Anisan’ny olana mandrava ny fiarahan’olon-droa koa ny fiankinan-doha ara-pihetseham-po na ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe : « dependance affective ».
Mandainga izy sa tsia, teknika roa hamantarana izany
Mandainga aminao ve izy sa tsia ? ny hany azo antoka dia tsy mbola nisy olona nanontaniana raha nandainga na tsia niaiky fa nandainga tokoa.
Ireo dingana 5 arahina raha hiverina amin’ilay teo aloha
Vao nisaraka ianareo saingy tsy te-hanary azy ianao satria mbola tia. Misalasala ianao satria na ny manodidina anareo aza efa tsy mandrisika anao amin’izany intsony koa .Inona ny fomba azo atao raha sendra izany?
Mpifankatia miady : Antony 3 mahatsara azy
Tsy misy mpifankatia na mpivady tsy miady izany. Mety ho ratsy fiafara anefa izany raha toa ka tsy hay ny mandravina azy. Fantaro koa anefa fa mety hanamafy ny fifamatoran’ny mpivady ny adiady. Diniho anie ireto tombony azo avy amin’ny adin’ny mpifankatia ireto e :
Torohevitra 7 mampaharitra ny fiarahana
Fanontaniana matetika hapetraky ny tanora ny hoe : ahoana no atao mba hampaharitra ny fitiavana sy ny fiarahana. Inona ny hadisoana tsy tokony hatao ? Atoronay anao :
Mampirafy ahy ve izy ? ahoana ny ahafantarana
Mampirafy ahy ve izy, fanontaniana iray izay maro mpanontany ary mety hanimba ny tokantrano koa na mitombina na tsia ny valiny. Midika mantsy fa efa misy ahiahy ao anatin’ny olona mametraka izany fanontaniana izany . Na izany aza, misy tokoa ny fambara hamantarana raha miaraka amin’olona hafa ny lehilahy na tsia :
Tsiambaratelo hialana amin’ny hasarotam-piaro
Mahasaropiaro anao fatratra ny vadinao na ny olon-tianao. Raha azonao natao dia niaraka taminy foana na aiza na aiza alehany.
Ahoana no hahafantarana fa tsy fitiavana fa efa fiankinan-doha ara-pihetseham-po no tsapanao ho an’ny olona miaraka aminao ? ireto ny fambara hanavahana azy :
1- Tsy mahavita manapa-kevitra irery ihany fa mila maka ny heviny foana aloha.
2- Miankina aminy rehefa misy andraikitra na adidy lehibe na goavana mahakasika ny fiainana toy ny fidiram-bola, ny fahasalamana, ny fandaminana samihafa…
3- Matahotra ny hiady amin’ny vady na ny olon-tiana hany ka tsy manao na inona na inona izay ahiana hiteraka disadisa mihitsy.
4- Tsy mahavita manomboka na manatanteraka tetikasa samirery mihitsy
5- Tsy mahazo aina rehefa samirery na matahotra ny hilaozana.
6- Mahatsiaro ho tompon’andraikitra avy hatrany raha misy zavatra tsy mety kely ao anatin’ny fiainana.
7- Mahatsiaro tena ho voatery hanatanteraka izay tiany foana na manatanteraka ny filàny .
8- Mila ny fanohanan’ny hafa foana.
9- Tsy mahavita mametraka ny fetra sady tsy mahavita miaro ny zo manokana.
Raha miseho aminao ny teboka 5 amin’ireo voalaza ireo farafahakeliny dia azo lazaina fa miankin-doha ara-pihetseham-po ianao. Tsy hahavita ny hahaleo tena mihitsy raha miankin-doha ara-pihetseham-po na amin’ny lafiny arak’asa na eo amin’ny lafiny fitiavana. Ilaina anefa ny manana izay fahaleovan-tena izay raha te-hanana fiainana ara-pitiavana sambatra. Mila matoky ny tena aloha vao afaka ny hizara sy hitia an-kalalahana. Mila manana fitiavana ny tena aloha vao afaka mizara fitiavana amin’ny hafa. Raha tsy izany dia tsy hahasambatra mihitsy ny fitiavana omena ny hafa.